Ireland: A troubled yet enchanted land | Breaking Travel News
Location: musha » Kutumira » Kuputsa Kufamba Nhau » Ireland: Nyika inotambudzika asi inonakidza
Ireland: Nyika inotambudzika asi inonakidza
Chikamu che network yemadziro "erunyararo" iyo inomhanya kuburikidza neguta uye chengetedza mativi maviri akapatsanuka
Belfast oenda iguta rinenge risinganzwisisike kune wekunze. Iri iguta rakanaka, uye zvaro pamusoro paro rakafanana nemaguta eEurope epakati nepakati. Asi kana uchinge wanyatsoongorora pasi pehukama hwepasi uye nekupfuura pakavakirwa dhizaini yeguta, vashanyi vanopinda munzvimbo yakavanda.
Belfast iguta rakakamurwa kwazvo pakati pevaPurotesitendi nemaKaturike - avo vakavimbika kukorona nevaya vanoona korona sechiratidzo chekupinda. Mapoka ese ari maviri anoona rimwe divi semagandanga. MaBritish akasiya zvakanyanya, zvichibvumira divi rega kuti riite zvaro chero bedzi mhirizhonga ichiitirwa padiki.
Kuita kushanya kwakachengeteka
Dr. Peter Tarlow vari muBelfast izvozvi vachishanda nemapurisa uye vachiitisa misangano nezve kuchengetedzeka uye kuchengetedzeka. Anga achishanda kweanopfuura makumi maviri emakore aine mahotera, maguta ane tarisiro yekushanya uye nyika, uye vese veruzhinji uye vakazvimirira vanochengetedza mapurisa nemapurisa mumunda wekuchengetedza kwekushanya.
Imwe yenyaya dzehurukuro yake yaive kukosha kwekufananidza hunhu chaihwo nebasa rakakodzera. Mabasa akadai semapurisa akapararira nezvikamu zvidiki zvakawanda, kazhinji kana mukuru achiwana kukwidziridzwa pachinzvimbo, izvo zvinokwidziridzwa zvinoreva kutora mupurisa, uyo akakwana mune imwe nzvimbo yemapurisa nekumuendesa mune nyowani. uye isina kukodzera chinzvimbo chehunhu hwake. Kazhinji izvi zvinotungamira kumapurisa akanaka ekusave anofara uye asina kukodzera (uye mu) mabasa avo matsva.
Munyika yakakamurwa kwazvo uye iine nhoroondo yemhirizhonga, kuchengetedza mapurisa munzvimbo dzavanonyatsokodzera kwakakosha zvikuru. Hwaro hwechikwata hunofanirwa kuve nhanho yekutanga mukupa kutenderera kwakachengeteka pamwe nehupenyu hwezuva nezuva kune vagari venyika.
Paakabvunza mumwe munhu kuti chii chinoitika kana munhu asingatendi kuti kuna Mwari, mhinduro yacho inotaura zvese. Pano, mumwe angave muPurotesitendi asingatendi kuti kuna Mwari kana muKaturike asingatendi kuti kuna Mwari! Kunzwa mhinduro dzakadai kunobatsira wekunze kuti anzwisise zvirinani chikonzero chekuti kune makumi mana makumi mana ekubatanidza madziro anopatsanura maPurotesitendi kubva kuKaturike.
Aya madziro, kunyange asiri akanaka, akaponesa mazana ehupenyu. Iwo humbowo hwekuti mamiriro ese epanyika akasarudzika, uye zvinonzwisisika mune imwe nzvimbo kana nguva zvinogona kunge zvisina musoro kune imwe nzvimbo kana nguva. Semuenzaniso, hotera yaDr. Tarlow "The Europa" yakabhombwa ka36, ikaita iyo hotera yakabhombwa zvakanyanya munhoroondo. Munguva ye "matambudziko," yakaenzana nezve kubhomba pasvondo.
Zvese izvi zvinogona kuita zvechisimba zvinosiya vashanyi vari munzvimbo yekuziva dissonance. Mumwe nemumwe, maIrish vanhu vakanaka kwazvo uye vanofara. Vane pfungwa dzakakura dzekuseka, zvinonakidza kuva navo, uye vane mutsa uye vanobatsira. Zvichida zvinosetsa, apo vanhu pavakaona kuti Dr. Tarlow muJuda, pese pese akagamuchira kunyemwerera kwoushamwari kana kumbundikira. Akavimbisa munhu wese kuti haasi muPurotesitendi kana Katurike asi muJuda. Muchokwadi, maIrish avo vane vanhu vanogamuchira vaeni vakave vanonyanya kugamuchira vaenzi kana zvave pachena kuti anga asiri chikamu chechero chitendero chechiKristu.
Kuwedzera nyonganiso, maPurotesitendi nemaKaturike vari kurwira proxy Middle East hondo. Vapurotesitendi vanotsigira Israel uye dzimwe nguva Britain kana kunyange US, nepo IRA (Katurike) ichitsigira PLO, Castro, neMaduro (kuVenezuela). Nekudaro, kana maIrish vasina matambudziko akakwana, ivo vari zvakare zvepfungwa kana panyama kutora mativi mukukonana kutenderera pasirese izvo zvisina kana chekuita navo.
Muchokwadi, Ireland neNorthern Ireland zvakaomarara zvekuti pamwe hapana wekunze anogona, kana achazombove, anokwanisa kunzwisisa matongerwo enyika anopatsanura guta rino, nyika ino, nevanhu vayo. Vazhinji vanopomera maBritish nebasa ravo, vamwe vanopomera vanapapa vepakati kana dzimwe nyika dzeEurope, uye vamwe vanotopomera maAmerican. Pamwe mhinduro, kana paine imwe, ndeyekuti vese vane imwe mhosva asi hapana ane mhosva. Mukupedzisira vanhu veIreland vanofanirwa kutsvaga huchenjeri hwekuisa zvakapfuura pamubhedha uye kumuka kune ramangwana rakajeka.
Panogara paine bhawa
Kusvikira iro zuva rasvika, pamwe zvinogona kunzwisiswa kuti nei whiskey uye doro iri iwo chaiwo madzimambo pano. Kuva ne "pint" hakugadzirise chinhu, asi pahusiku hunotonhora hwechando, kunodziisa mweya uye kunobatsira munhu kukanganwa izvo zvingangove zvisingagadzirike. Ireland inodzidzisa kuti vanhu uye nyika yavanogara yakaoma, uye mhinduro dzakareruka dzinotitorera munzira dzakafa.
Dr. Peter Tarlow vari kutungamira chirongwa cheSaferTourism neTN Corporation. Iye inyanzvi inozivikanwa pasi rese mumunda wekuchengetedzwa kwekushanya nekuchengetedza. Kuti uwane rumwe ruzivo, shanya safetourism.com.
Pro Israel isayina pane imwe yemazhinji "rugare" masvingo anopatsanura guta
Mifananidzo yevanhu vakapondwa padivi reCatholic
Chirangaridzo kuvaPurotesitendi vakaurayiwa
Giants 'Causeway - kutsika matombo egiants
Dr. Peter Tarlow vachidzidza kudurura Guinness
Belfast oenda Ayarendi Izirayeri Middle East Northern Ireland Peter Tarlow
Sands Resorts Macao uye timuLab Kutangisa Groundbreaking, Imersive Museum kuVenetian Macao
United Nations inoshora zvinotyisa US kuCuba
Bermuda inotanga Vhiki yeBlack Golfers kusimudzira...